PT-141 (Bremelanotide): A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe maka ịkwa iko nke nwanyi
2. Kedu ka o si arụ ọrụ?
3. Ngwa PT-141
4. Uru nile nke PT-141
5. PT-141 maka Mmekọahụ Mmekọahụ
6. Otu esi eji PT-141
7. Nwekọrịta ahụmahụ Site na ndị ọrụ PT-141
8. Mmetụta Mgbe ị jiri PT-141
Maka mmekorita nwanyi nke na-eme ka umuaka na-enwe obi uto n'ime oge nlekọta, PT-141 bu ezigbo ihe. Bremelanotide sitere na Melanotan II; ya mere, ọ na-enye otu ụdị ọrịa ahụ. Melanotan nke abuo na enye aka n'inye ihe omimi ahu dika o na-achikota nsogbu aghara aghara, nke gunyere umunwanyi.
POP-141 peptide adịghị emepụta na ahụ dịka ụbụrụ ndị ọzọ na-eto eto. PT-141 (189691-06-3) ịbụ onye na-achọghị ịhọrọ ndị na-ahụ maka ndị na-anabata melanocortin ejiriwo maka ọgwụgwọ nke nsogbu mmekọahụ maka oge ụfọdụ.
Nchọpụta nke PT-141 dịka otu n'ime ndị na-enyere ụmụaka aka na-adọrọ mmasị ka ọ mere na mberede. Otu ọkà mmụta sayensị mara dịka Mac Hadley wepụtara onwe ya dị ka ihe atụ ma dịka ọ na-anwale ahụ ya weere ike ruo awa asatọ n'ịkwụsị. Ọ bụ n'ihi na ị na-enweta dose abụọ nke Melatonin nke Abụọ, onyinye nke achọpụtara na mbụ.
A na-ebu ụzọ nyochaa Melanotan na oke dị na 1960 ma gaa na 1980s. A maara Melanocortins ka ha rụọ ọrụ dị mkpa n'usoro iwu nke ọtụtụ ọrụ ahụike. A na-anwale Melanotan 1, nke bụ analogụ Melanocortin, dịka onye na-elekọta ụkwara mmiri mgbe a na-anwale Melanotan II dịka onye na-elekọta ndị na-enwe mmekọahụ.
Otú ọ dị, ọ na-eji ya eme ihe mgbe ọ chọpụtara na ọ na-eduga ná mmụba nke ọbara mgbali nke ihe ọmụmụ ya. Na 2016, Fpt na PT-141 kwadoro ya dị ka ọgwụgwọ maka ịda mbà n'obi na ụmụ nwanyị.
2. Olee otú ọ na-arụ ọrụ?
PT-141 na-arụ ọrụ site na hypothalamus, na-eduga na mmụba nke agụụ mmekọahụ. Ọ na-ejikọta ndị na-anabata melanocortin dị n'ụbụrụ, si otú a na-ezipụ ozi na akwara na akụkụ ahụ ike. N'adịghị ka mgbakwunye ndị ọzọ dị ka Viagra, nke na-arụ ọrụ na usoro vascular, PT141-141 na-emetụta libido ya ozugbo. Nke ahụ bụ ihe kpatara na a gaghị ewere ọgwụ ndị ọzọ na-enwe mmekọahụ dị ka ndị na-agwọ ọrịa elekịta n'ihi na ha adịghị emetụta ọchịchọ mmadụ ozugbo.
PT-141 na-arụ ọrụ site n'ịkpali na ime ka hormone dopamine, bụ nke a maara iji rụọ ọrụ dị mkpa n'inwekwu mkpali nke nwoke. Dopamine bụ ihe a maara nke ọma nke bụ onye na-ahụ maka ntanetịnta na onye ọrụ ya bụ ịme ka arụ ọrụ. Mgbe onye nwere obere dopamine, ọ pụtara na libido ha ga-abụkwa ala. Oge PT-141 bụ oge elekere 120.
♣ PT-141 na-agbapụ aka
Pire PT-141 ọgwụ
♦ Na-eme ka afọ ojuju nwee mmekọahụ
Ị nwere otu oge, na-eche ihe ị nwere ike ime iji nwee mmekọahụ? Eziokwu bụ mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe karịa inwe mmekọahụ iji nweta nnukwu 'O.' Mmekọahụ nwere ike inye gị orgasms kama ọ bụghị dị ka ịkụ ụda dị ka ha kwesịrị. Maka ụmụ nwanyị, ọ na-akawanye njọ karị ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke n'ihi nrụrụ ha.
Enweghi ike elelị mkpa nke iji mmekorita nwoke na nwanyị na-akpalite orgasms. PT-141 maka ụmụ nwanyị na-enye obi ụtọ dị ukwuu mgbe mmadụ na-enwe mmekọahụ. Ọ bụrụ na ị nọ na nche maka ihe bara uru iji mee ka agụụ mmekọahụ gụkwuo gị, ọgwụ a ọrụ ebube bụ uzo a ma ama.
♦ Na-enyekwu ike
Ị nwere ike ịnwe nnukwu mmekọahụ ma ọ nweghị ike ime ya. Enweghị ike ọ bụghị nanị na emetụta ndụ nwoke ma ọ bụ nwanyị gị kama ọrụ gị kwa ụbọchị. Nke ahụ pụtara na ị gakwaghị enwe obi ụtọ itinye aka n'ime ihe omume kachasị amasị gị ka ọ bụrụ na ị gaghị arụ ọrụ.
Enweghị ike anaghị apụta na ndụ gị na-agwụ. Ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe gị mgbe niile n'ihi na e nwere ụzọ ị ga-esi nweta ume ike nakwa nke mmetụta mmekọahụ gị.
Ozugbo ị na-eji PT-141, ị ga-achọpụta na ị na-enweta ike ma na-echekwa na ị bụ nwata.
♦ Mee ka obi sie gi ike
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa na-ekpebi ma ị ga-enwe obi ụtọ n'ụzọ mmekọahụ bụ obi ike i nwere n'ime onwe gị. Obi ike na-eme ka obi sie gị ike na ị nwere ike ịnapụta ihe n'àkwà. Dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ gị na-enwe ọganihu anụ ọhịa n'oge gara aga, o yikarịrị ka ị ga-enweta obi ike na ị kwadoro nkà ahụ.
Ọ bụ otu n'ime àgwà kachasị mma nke nwere ike inwe. Mgbe ị nwere obi ike dị ukwuu n'ihe ndina, ọ ga-abụrịrị na ahụmahụ ahụ dum ga-atọ ụtọ karịa nke ahụ. Ọbụna nke ọzọ, ọ na-eme ka ị nwekwuo obi ụtọ mgbe ị na-enwe mmekọahụ.
Maka otutu ndi mmadu, inwe obi ike nke nwanyi abughi ihe di mfe inweta n'ihi na ha nwere ike iche na adighi ike ha emeela ka ha daa. Mgbe obi ike gị dị ala, ịmepụta orgasm na-aghọ nnukwu ihe. Uru nke na-abia na ojiji nke mmekorita nwanyi bu na o na - eme ka i nwee mmekorita ndi na - enwe obi uto.
PT-141 maka emeso nsogbu gi nile nke nwanyi na-enye gi obi ike nile i choro mgbe nile. A maara ndị inyom nwere obi ike na-enwe mmekọahụ na-enwe mmekọahụ ma na-atọ ụtọ karịa ụra. Ka a sịkwa ihe mere iji PT-141 maka ụmụ nwanyị na-amụba kwa ụbọchị. Ozugbo ị na-eji PT-141, ana m ekwe gị nkwa na inwe obi ike inwe mmekọahụ ga-abawanye elu n'oge kachasị anya.
♦ Ọ na-eme ka agụụ na-agụsi mmadụ agụụ ike
Ị maara nke ahụ na onye ọlụlụ gị na-enye gị mgbe ị na-ehi ụra ma ọ bụ isi ọwụwa iji zere mmekọahụ. Ọ na-akawanye njọ ma ọ bụrụ na ndị ọzọ dị njikere maka ya, mana nke ahụ bụ ihe ikpeazụ i nwere ike iche. Nke ahụ nwere ike imebi mmekọrịta gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ihe dị ukwuu n'afọ ndị gara aga.
Taa, ihe karịrị 30% nke ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ n'ihi enweghị agụụ mmekọahụ n'ụwa nile. Ihe mere nke a ji bụrụ nke a na-ahụkarị n'etiti ụmụ nwanyị bụ na ọtụtụ ihe na-atụnye ya. Ọ bụ ezie na ogo etiti afọ estrogen ma ọ bụ ngbanwe na mmepụta hormonal bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere mmadụ ji enwe agụụ mmekọahụ nwere ike ibuteghachi azụ, mkpụrụ ọgwụ akara nwa, nsogbu mmekọrịta, ike ọgwụgwụ, ịda mbà n'obi, nchekasị, na ọgwụ ụfọdụ pụkwara iduga ya.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na mmasị gị na inwe mmekọahụ na-adị ala site na ụbọchị ahụ, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà maka ọrịa mgbochi agụụ mmekọahụ. Ihe dị mma bụ na PT-141 maka mmekorita mmekọahụ nwere ike inyere aka wepụ nke a. Ọ na-eme ka ị hụ na ị na-enwe ahụ ọkụ ma na-emegharị mgbe mgbe.
♦ Tans anụahụ
Taa ụcha akpụkpọ anụ aghọwo ihe a ma ama. Na oge ndị gara aga, akpụkpọ anụ bụ ihe ịrịba ama na otu na-arụ ọrụ n'okpuru anyanwụ maka ogologo oge. N'oge a, a na-ewere na akpụkpọ anụ bụ maka ndị na-ahụ ọganihu na inwe ọkụ ọkụ. Na ndị na-etinye onwe ha na ụdị ụdị tanning dị ka tanning lotions, tanning na-adịghị, n'èzí tanning, na tanning ime ụlọ, gịnị ka ị chere nwere ike ịbụ uru nke tanning?
Tanning ga-enye gị ụzụ ọkụ ahụ nke ga-ahapụ onye ọ bụla drooling. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị ndị na-ahụ n'anya na-apụ, mgbe ahụ, ịcha akpụkpọ anụ kwesịrị ịbụ na ndepụta ịwụ gị. Ndị a ma ama na-akwụ ụgwọ ọtụtụ puku dollar iji gbanwee akpụkpọ ahụ ha n'ihi na nke a bụ ihe na-eme ka ha nwekwuo mmetụta na ọrụ ha. Anyị abụọ nwere ike ikwere na akpụkpọ ahụ dị ọcha na-arịa ọrịa ma na-agba oyi. Dịka ị nwere ike ịnwe akwa uwe kachasị mma, ntutu na-acha ọcha na ezé na-acha ọcha, ụda ọlaedo nwere ike ịtọ gị mma n'emeghị ka ị na-arụsi ọrụ ike.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ ma na-eche na ị naghị achọpụta ahụ gị, ị ga-anwale ịcha akpụkpọ anụ. A tan na-eme ka nkwonkwo dị na ahụ gị dịkwuo mma, na-eme ka uru gị dịkwuo mma. Ị nọ na-adọ ọgụ ma na-enye gị mgbatị ahụ, gịnị mere na ị gaghị enweta ọkụ na-eto gị mma anya?
E nwere ọtụtụ ụzọ isi nweta tan, ma na Ngwa PT-141 na-eburu ụbọchị. Ịdị ukwuu na-ekpuchi anyanwụ nwere ike ime ka ọ bụrụ na akpụkpọ anụ na-emebi ma ọ bụ njọ ka ị nwee ọrịa kansa. Otu n'ime uru PT-141 bụ na ọ dị mma ma ọ gaghị enwe ike ịkpatara gị mmetụta ndị ọzọ. Bremelanotide na-enye gị ezigbo tan ebe ọ na-emetụta mmepụta nke melanin, nke bụ maka ebubo akpụkpọ anụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe nile ka ị nweta usoro nchekwa ụda nke ọma na nke ga-enye gị ihe dị egwu, PT-141 (189691-06-3) bụ ụzọ aga.
♦ Ike Erections
Ọ na-esiri gị ike ịnweta nrụrụ siri ike? Ọ bụghị naanị gị. Ọtụtụ nde mmadụ na-ata ahụhụ na ọtụtụ n'ime ha na-emenye ihere na ọbụna ịgwa onye ọ bụla banyere ya.
Onye obula choro ka ulo oru siri ike. Ọbụna ndị na-enwe obi ụtọ na ntinye ederede ha kwesịrị ịmalite ime ihe siri ike iji mee ka ha nwee mmekọahụ. Ọfọn ọ bụrụ na ịchọrọ ka nrụgide siri ike jiri PT-141. Ọ bụ nnukwu mmekorita nke mmekọahụ ga-eme ka ụlọ gị sie ike dịka nkume.
(1). E jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-enwe mmekọahụ
PT-141 na-eso ndị nkwalite mmekọahụ ndị ọzọ dịka viagra na-ekerịta ọtụtụ ihe yiri nke ahụ, mana ọdịiche dị ole na ole. Dịka e kwuru na mbụ, PT-141 na-arụ ọrụ site na hypothalamus n'ihi ya na-emetụta agụụ mmekọahụ gị kpọmkwem. N’aka nke ozo, oru ndi ozo n’ulo akwara, site n’ịbawanye uto obara n’aru gi niile, karie mmekpa ahu. Enweghị ike ịkpọ ndị di na nwunye dị ka aphrodisiacs.
Dika ntule PT-141 siri kwuo, ihe PT-141 na-ewe oge kachasị oke iji nweta mmetụta. Dị ka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị inyom nwere ike ịhụ mgbanwe ụfọdụ n'ime nkeji ole na ole mana maka ndị ọzọ, ọ nwere ike were ọtụtụ awa. N'ihe niile, PT-141 bụ otu n'ime ndị na-eme ngwa ngwa na-eme ka ndị na-enwe mmekọahụ nwee ike ịmetụta mmetụta ha na-enwe na mmekorita inwe mmekọahụ n'oge kachasị dị mkpirikpi.
(2). PT-141 ọ dabara adaba maka ụmụ nwanyị?
Dika ma ndi nwoke ma ndi nwanyi jiri PT-141, o bu ihe ndi nwanyi choro. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-enye ha ọtụtụ n'ime uru na obere mmetụta dị na ya ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Nanị ihe mgbaàmà nke na-emetụta ha bụ ọgbụgbọ na vomiting, nke dịkwa obere.
Tụkwasị na nke a, ụmụ nwanyị nabatara ọgwụ dị mma ma e jiri ya tụnyere ndị nwoke. PT-141 na-abịa dịka onye nzọpụta nye ndị inyom n'ihi na e nwere ọgwụ ole na ole na-ejikọta mmekọahụ na ụmụ nwanyị.
Ụzọ kachasị mfe nke ngwa PT-141 bụ site na ogwu. Ọgwụ a na-abakarị uru nye ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na-agwọ nsogbu nsogbu mmekọahụ.
A na-ejikarị aka na-emegharị ahụ, ebe enwere ebe nchịkwa. Ọtụtụ mgbe, isi ihe nke injections dị gburugburu afo na obere ala ma ọ bụ apata ụkwụ. E kwesịrị inye jabs n'otu oge nke ụbọchị ka i wee nwee ike nweta ihe kacha mma Ahụmahụ PT-141.
Nzuzo PT-141 n'ozuzu maka nwoke na nwanyị bụ 2mg, nke a ga-enye otu awa tupu enwe mmekọahụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya na nke mbụ, ị nwere ike ịgbanye 1mg dị ka nyocha ụzọ tupu ị gbakwụnye 1mg ọzọ na nkeji iri atọ ka e mesịrị.
Iji zere ịṅụbiga mmanya ókè, ị gaghị agafe 2mg na iri asaa na abụọ. Ị ga-ahọrọ mgbe niile oge kachasị mma, nke ahụ dị gị mma.
Ntughari PT-141 bụ ụzọ ọzọ ị ga - esi nyere PT-141 ntụziaka. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ ya n'ihi na ọ dị mfe iji. Naanị site na ịbanye na PT-141, ị nwere ike ị nweta libido ị na-achọ. Nke a bụ ihe ị na-eme iji nweta ngwa ngwa PT-141;
Mee ka imi gi di nwayo iji kpochapu akwukwo maka ogwu.
Gụọ ntụziaka niile dị na nkwakọ ngwaahịa tupu ịzie ya. Kwuo tupu ị na-eji ma jiri obere ego zụọ ma ọ bụrụ na egosiri ya.
Ghichaa karama ahụ ma jiri nwayọọ mechie ọgwụ ahụ. Enwere ike iji ya mee ihe mgbe ị nọ n'ọnọdụ ziri ezi ka i ghara inwe ike imechi isi gị azụ. Na-edebe kalama ahụ mgbe niile ka ọ ghara ịdị ọcha.
My libido laghachiri na nkịtị
Agnes K na-ekwu, sị, "Na mbido, azụtara m ngwaahịa a maka akpụkpọ anụ. Akpụkpọ m meghachiri nke ọma, m kpebiri ịnọgide na iji ya. Otu ihe mere ka m nwee mmasị na PT-141 ahụ bụ eziokwu na ọ na-eme ka libido nwekwuo ya. Echeghị m na libido m ga-agbanwe ebe ọ bụ na m nwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye niile dị ka ọgwụ magburu onwe ya. Site n'abalị mbụ m ji ya, ọchịchọ m anọwo ebe ahụ. Mụ na onye mụ na ya na-akpakọrịta ugbu a n'otu abalị. M na-eche na m amaghị banyere ya na mbụ. N'ezie, enwere m mmetụta dị ukwuu. "
Ole na - emetụ mmetụta
Lilian D. na-ekwu, sị, "Anọ m enwe mmekọahụ na-enweghị afọ ojuju ma ọ bụrụhaala na m nwere ike icheta. My libido wee site na onye na-ama jijiji na-enweghị mmetụta ọ bụla ọbụna n'oge e mere. Ndị dọkịta nyere m ọgwụ ụfọdụ, m kpochapụrụ mmetụta ya dị iche iche, karịsịa nsị ngwa ngwa na ehighi ura. Otú ọ dị, ahụmahụ PT-141 m nwere dị iche. Anaghị m ata ahụhụ site na mmetụta ọ bụla ọ bụla, na ọbụna site na Nyocha PT-141 Agụwo m na ntanetị, ọ bụ mmadụ ole na ole na-ata ahụhụ ọ bụla. Site n'inwe mmekọahụ a, enwere m ike ịmalite inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị m akwụ ụgwọ ahụhụ site n'ọtụtụ mmetụta. Daalụ, PT-141.
Na-enye nsonaazụ kacha mma
Maggie S. na-ekwu, sị, "Eji m akpụkpọ anụ ma na-eme ya maka afọ iri na ise gara aga. Echere m na m ga-anwale ngwaahịa a mgbe m gụchara PT-141 nyocha ma hụ ihe ole na ole n'ihu na mgbe foto ndị gosipụtara otú ọ ga-esi nye ọkụ. Ihe ọ rụpụtara juru m anya. Ihe mgbochi tanning nke m na-eji emeela ka m hapụ ísì ọjọọ, mana nke ahụ bụ ihe n'oge gara aga ugbu a. Oma oroma ha nyere m anaghịzi aga, ma ugbu a, ọ bụ ihe dị mma. M hụrụ eziokwu ahụ n'anya na onye ọ bụla chere na a mụrụ m dị ka nke a. Gbalịa mee nke a, ma eleghị anya, ị gaghị ele anya. "
Ọ na-enye ndị kasị mma orgasms
Benjamin Paterson na-ekwu, sị, "N'oge na-adịbeghị anya, nwunye m kwụsịrị inwe orgasms, ihe niile m gbalịrị yiri ka ọ ga-ada nkume. O kwụsịrị inwe mmasị, enwerekwa m ike inwe mmekọahụ n'ihi na m chere na enweghị m ike imeju ya. Agwara m dọkịta, ọ na-atụ aro ka m nwalee nke a. Enwere m obi abụọ banyere ya ma kpebiri inye nwunye m ụbọchị ọmụmụ ya ma hụ otú ọ ga-esi aga. N'ụzọ tụrụ m n'anya, anyị nwere ihe kasị mma n'abalị ahụ. O bilitere na nwetakịrị aka ma gwa m na ya enweghi orgasms siri ike dị otú ahụ ruo ọtụtụ afọ. Enwere m obi ụtọ na n'ikpeazụ, nwunye m nwere ike ịnụ ụtọ ịhụnanya anyị. Anyị na-enye iwu maka mbupu anyị ọzọ wee ghara ichere maka ya. M ga-agwa ya onye na-eche na ha agaghịzi enwe orgasm. "
Jesica S. na-ekwu, sị, "Mmekọahụ a bụ ihe kachasị mma m nwetara ugbu a. Enwere m mụọ di na nwunye mgbe m dị obere n'ihi ọrịa ahụ m tara, ọ dịkwabeghị ihe ọzọ. Ihe ọzọ na-adịghị mma ma na-eche iru ala, enwere m ihe mgbu mgbe nile n'ihi na enweghi m mmasị inwe mmekọahụ. PT-141 enyerela m aka, karịsịa na orgasms m. Enwere m ike, ana m achọkwa ya. Di m na-ekwu na enweghi m ụdị sexy a ma ugbu a chọkwara iji ya. PT-141 emeela nnukwu ọdịiche na alụmdi na nwunye m, enwekwara m ekele ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bara uru penny kwa. "
8.Mmetụta Mgbe ị jiri PT-141
Ọtụtụ ndị na-aṅụ ọgwụ a, na-enwe ahụmahụ dị mma Ihe PT-141. Ka a sịkwa ihe mere na ha ka na-adabere na ya ka ha na-emeso ụbụrụ na-adịghị mma nakwa dịka anụ ahụ ha. Ọ bụ ezie na ọ na-enye ihe niile a, ọ dị mkpa ịmara na dịka enwere uru PT-141 bụ ihe ize ndụ.
Nke a apụtaghị na ị ghaghị ịta ahụhụ site na mmetụta ndị dị na ya; kama, enwere ihe ize ndụ na ihe na-achọghị ma ọ bụ na-atụghị anya ya nwere ike ime. Ụfọdụ nwere ike ịdị nwayọọ nke na ị gaghị achọpụta. Ndị ọzọ na-apụ n'ime awa abụọ mbụ nke iji ya. Nke a bụ ụfọdụ mmetụta ndị ị nwere ike ịta ahụhụ site na mgbe ị na-eji PT-141;
Mmebi iwu mpempe akwụkwọ - Ụfọdụ ndị nwere ike iji ọgwụ a eme ihe na mmekorita mmekọahụ na ụdị ndị ọzọ nke ime ihe ike. Nke ahụ bụ n'ihi na mmadụ nwere ike ọ gaghị adị njikere iji chịkwaa ọchịchọ agụụ mmekọahụ tupu ya ebido imejọ iwe mmekọahụ.
Ọchịchọ mmekọahụ nke na-agaghị ahapụ- Mkpali siri ike inwe mmekọahụ ọbụlagodi mgbe i nwesịrị ya bụ otu n'ime nsogbu ndị ị ga-ata ahụhụ site na ịṅụ ọgwụ a.
Ozugbo ịmịnye ọgwụ a
Nsogbu ọgwụ, dịka ọbara mgbali elu
Ahụhụ na-ahụ maka ịwa ahụ - Injections mara na ọ ga-eme ka obi erughị ala ala mgbe gọọmentị gasịrị. Nke a na-emekarị nke ọma ma ọ bụrụ na enweghi ihe mgbu ma ọ bụ saịtị ahụ na-ebute ọrịa. Iji zere ihe dị otú ahụ, na-eji ogwu na-enweghị ihe ọ bụla mee ihe iji nye ọgwụ ahụ.
Ọrịa respiratory elu
Inwe onye ibe gi kwesiri ibu ndi Roses nile, obi di nma, chocolates, na romance. Ọ bụrụ na nke a abụghị ọnọdụ maka gị, ị nwere ike ịhụ onwe gị na-echegbu onwe gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nsogbu libido. Ọ bụghị nanị na inwe mmekọahụ dị mkpa ná mmekọrịta, mana ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ mmadụ. Inwe ezi obi di na nwunye abiawo ka ime ka aru di nma ma gbochie onye na-enweta oria site na oria ojoo.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-enwe mmekọahụ, ọ na-agwụ ike, ọ bụrụ na ị jiri nwayọọ nwayọọ kwụsị inwe mmasị, ị ga-etinye ego n'ihe gbasara agụụ mmekọahụ gị. Na ịchọrọ ihe iji kpoo agụụ mmekọahụ gị, ọ ga-abụ na ị ga-ahụ ọtụtụ ndụmọdụ na aghụghọ ndị nwere ike ọ gaghị agbanwe. Site na itinye ya Mmekorita nwanyi, ị nwere ike ime ka mmekọahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Taa, ọtụtụ ndị na-achọ ịlụ ahịa n'ahịa na-akwado gị na-abawanye na libido na ntachi obi. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ naanị ahịa ahịa ndị ahịa na-eji dị ka ere usoro.
N'ikwu eziokwu, ọtụtụ n'ime ihe ndị a adịghị etinye aka na nyocha ahụike na ihe ị gwara gị nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu. Tupu ị edozi maka mmekorita nwoke, ị ga-aga maka nke na-adịghị ize ndụ maka gị, nke ahụ sitere n'aka onye ntinye aka. Ogologo oge kwesiri ibu ihe kachasi elu mgbe i kpebiri ichekwa ihe eji eme gi ka gi na nwoke di nma.
Ọ bụrụ na ị ka na-eche ma ọ bụrụ na onye na-eme ka agụụ mmekọahụ nwee ike ịzụta na ebe ịzụrụ ya, anyị nwere ike inyere gị aka ime mkpebi ahụ. Anyị kachasị mma PT-141 emeputa onye ga-enye gị PT-141 kasịnụ maka ịkwado mmekọahụ. Gini mere ị ga - eme ka ị ghara inwe mmekọahụ taa?
Erectile Dysfunction, Nsogbu nke Urologic Clinics- E-Book, Site Culley Carson
Mmekorita nke nwanyi na nwanyi, site na Marta Meana.
Mmekọahụ na Mmekọahụ, nke Elisabetta Consantini dere, Donata Villari, Maria Teresa Fibcamo
Hallo, gibt es die Medikament auch na Pulver?
2019-10-31 na 3: 33 am
Ja, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der ịmụ nwa PT141 empfohlen. Injektion Es ist PT141.